Tsenan’Anosibe Nokasaina hodorana ?
Halatra taolam-paty Fisolokiana avo lenta ?
Raha ny fanadihadiana azon’ny zandary hatramin’izay nahitana resaka halatra taolam-paty, mijanona ho fisolokiana avo lenta hatrany izany. «Ireo izay tratra dia tsy mahita ny mpandray ny taolam-paty izay heveriny ho entam-barotra. Ny atidoha mikotrika nampaniraka olon-kafa milaza fa misy mitady. Ilay voairaka mamoaka vola hividianana izany kinanjo tsy hita ilay tompon’ny ketrika fa efa azon’ilay nahitana ny taolam-paty ny vola ary ity farany dia mpiray tsikombakomba amin’ilay tena mpaniraka. Matetika ireo mpanera sy ireo mpanelanelana izay efa namoaka vola nefa tsy nahita mpividy no tra-tehaka, sady efa nividy lany vola no itobian’ny entam-barotra tsy ahitana mpandray ary voasambotr’ireo mpitandro filaminana. Dia ireny miahaka fotsiny ireny ny entana fa matahotra ny hosamborina ireo nividy tsy nahita mpividy”.
Oniversiten’Antananarivo Sakoroka tsy nifankahitana indray
Nafana indray ny sakororoka teny Ankatso omaly. Nifamaliana ny tora-bato sy ny baomba mandatsa-dranomaso hatrany amin’ny faritry ny anjerimanontolo. Ao anatin’ny fampikatsoana tanteraka ny fampianarana ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin’ny SECES Antananarivo.
Asan-jiolahy sy fanafihana Mitaintaina ny banky
Nitombo isa tato ho ato ny fanafihana olona mitondra vola..na hanatitra io na haka amina banky. Tsapa fa mandinika sy manao fanadihadiana ireo jiolahy ary manana mpanome vaovao. Hatreto aloha, mpiambina tsotra tsy mitam-basy no tena maro an’isa miambina banky na dia misy mpitandro filaminana ihany aza.
Pavillon Analakely Nitokona ny mpivarotra
Nitokona tsy nisy nety nivarotra omaly alatsinainy ireo mpivarotra miisa 900 etsy amin’ny pavillon Analakely. Anton’izany ny tsy faneken’izy ireo ireo trano vy mpivarotra friperie eo ampitany izay kasain’ny kaominina hafindra vonjimaika manoloana azy ireo. Hasiam-panamboarana mantsy ny tata-drano amin’ny faritra misy ireto mpivarotra ireto ka tsy maintsy hafindra toerana izy ireo.
Fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana Misy manipy hoditr’akondro ve ny ben’ny tanàna ?
Nanao hetsika fanairana tetsy amin’ny Pavillon Analakely ny faran’ny herinandro teo ny fikambanan’ireo mpivarotra eo anivon’ity tsena ity na ny FIMPAVA mba hanairana ny avy eo anivon’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra hanala ireo mpivarotra tsy ara-dalàna izay manakona ny mpivarotra ara-dalàna ao amin’ny pavillon.
Fikarakarana taratasin-tany Lafo loatra ny sarany, tsy zakan’ny sarambabem-bahoaka
Tsy mahavita mikarakara ny taratasin-taniny intsony ny ankamaroan’ireo mponina monina ivelan’ny renivohitra amin’izao raha araka ny fanadihadiana natao.
Ambatomirahavavy Mikaikaika noho ny delestazy ny mponina
Simba avokoa ny ankamaroan’ny fitaovana, ora iray isan’andro raha kely no miaina ao anaty delestazy ireo mponina ao anatin’ny distrikan’Ambatomirahavavy.
Nahoraka alina efa tany ho any amin’ny 11 ora alina fa misy firehetana eny amin’ny tsenan’Anosibe.
Tsy ny tsena anefa no may fa trano iray ao ambadiky ny tsena, raha ny fanampim-baovao avy amin'ny Delege Kaominaly eny an-toerana ary natahorana ho tratra ny tsena eny an-toerana. Efa tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina. Ny feo mandeha hafa ihany koa dia tafiditry ny politika maloto ity resaka fandorondoroana ity noho izao toe-draharaha mafampana izao.Ny nampanahy ny maro dia ny hoe sao lahy ka misy ambadika politika noho ny fifidianana io afo nidedaka tampoka teny Anosibe io ? Tsikaritra ihany mantsy halina fa nisy ny andian’olona somary maherihery fihetsika tamina faritra maromaro teto Antananarivo renivohitra.